Semalt waxay bixisaa arimaha waxtarka leh ee ugu sareeya 5 Sawirada Sawirada
Inta badan, macluumaadka aan u baahan nahay waxaa lagu xannibay goob, iyo annaguna ma xoqin karo ama si qumman ugama socon karo. Inkastoo goobaha qaar ay ku dadaalayaan in ay soo bandhigaan xogta qaab nadiif ah oo qaabaysan, kuwa kale ma bixin karaan wax tarjuma ama shabakad xog ah Taasi waa sababta aan u baahannahay inaan galno websaydhada ugu fiican, macdanta, iyo waraaqaha. Halkan waxaan ka wada hadalnay shanta qalab ee ugu muhiimsan arrintan - paraguay contrata.
Webhose.io wuxuu inaga siinayaa xogta waqtiga-dhabta ah ee kheyraadka internetka iyo goobaha. Qeybta ugu wanaagsani waa miinooyinka barnaamijkan oo ay ku uruuriyaan goobaha si haboon una keenaan xogta nadiif ah oo si habaysan u qaabeysan. Waxa kale oo aanu awood u leenahay inaan xoqno xogta ku salaysan ereyada muhiimka ah, odhaahyada, luqadaha iyo dabeecada. Natiijooyinka kama dambaysta ah waxaa laga heli karaa foomka XML, RSS iyo faylasha JSON. Inkastoo barnaamijkani yahay mid bilaash ah, waxaa laga yaabaa inaad gasho qiimaha ujrada ah haddii aad rabto inaad isticmaasho Webhose.io ujeedo ganacsi. Qorshaha lacag bixinta ayaa kuu ogolaan doona inaad u dirto codsiyo badan oo HTTP ah oo ku jira serverka ugu weyn, taas oo kuu fududeyneysa inaad xoqdo oo aad ku qaxdo goobaha.
3. Dib u bixinta Hub:
Haddii aadan ku qanacsanayn qoodhadhka, Ka bixid Hub wuxuu ku siin doonaa adiga oo leh shabakad muuqaal ah oo waxtar leh, taas oo kuu sahleysa inaad ku uruuriso xogta macmiilka, version-keeda waxaa laga heli karaa bogga rasmiga ah, iyo qaybta bilaashka ah waxaa laga soo saari karaa dukaanka online kasta. taas oo aanad u baahnayn inaad leedahay xirfadaha barnaamijka.
4. Dhagaysiga: 14)
5. Shabakadda Wareega ee Chrome:
Haddii aad hayso Google Chrome oo ah shabakadda internetka ee ugu muhiimsan, waa inaad doorataa Shabakadda Warshadaha. Waa barnaamij koriimo leh oo madadaalo leh oo kuu ogolaanaya inaad abuurto bogag internetka ah iyo shabakadaha ganacsiga. Waxaad kaliya u baahan tahay inaad soo dejiso, rakibo oo ku dar buug-yarahaaga kambiyuutarkaaga Chrome si aad u aragto sida ay uga soo saari karto macluumaadka bogaggaaga. Waxa kale oo aad soo iibsan kartaa sitemaps ama isticmaali kartaa sheybaarada si kor loogu qaado muuqaalka guud iyo waxqabadka boggaaga. Waxay kaydin doontaa xogtaada la soo saaray oo ku jira faylasha CSV ama qaybta "Archiving".